Na-eri nri oche, sofa, na-eri nri na tebụl, Plastic oche, Pu oche - Forman
Na-eri nri oche
Nwa oche nke Kid
Isiokwu na-eri nri
Tianjin Forman Ngwá ụlọ bụ ụlọ ọrụ na-eduga n'etiti ebe ugwu China nke guzobere na 1988 na-enyekarị oche iri nri na tebụl.
Ikesa ahia bu 40% na Europe, 30% na USA, 15% na South America, 10% na Asia, 5% na mba ndi ozo.
Forman nwere nnukwu ndị otu ọrịre nwere ihe karịrị 10 ndị ọkachamara na-ere ahịa, na-ejikọ ụzọ ahịa ọnlaịnụ na nke offline, ma na-egosi mgbe niile ..
Irmụaka oche 1720-ụmụaka #
Imewe bụ Mkpụrụ Obi maka oche Plastic. A na-eji oche polypropylene nke nwere ezigbo gburugburu ebe obibi oche ahụ. Oche a na-ejikarị ime ụlọ eme ihe, nwekwara ike ịbụ ihe eji eme ihe n'èzí-ihe UV na mkpuchi uzuzu n'èzí. Dị ka mgbanwe bụ atụmatụ PP plastic, ị ga-ahụ na ọ dị ezigbo mma ịnọdụ ala.
Chairmụaka oche 1719-#mụaka #
Oche ụwa nke sitere n'ụlọ nsọ sitere n'ike mmụọ nsọ, oche a dị ka alaka ụlọ ọrụ na-agbakwunye udo nke ọkaibe na ohere ọ bụla. Oche oche ya siri ike nke a na-etinye akara bamboo maka ikuku nke oge a dị jụụ, nke zuru oke maka kichin, ọfịs, ma ọ bụ patio.
Chamụaka oche 1619-ụmụaka #
A na-eji ígwè na osisi rụọ oche ya, akụkụ ya abụọ jikọtara ya ọnụ site na nkwado nkwado na ụkwụ ụkwụ. Oche oche ịwụ plastik jikọtara ya niile, na-egosipụta agba siri ike. A na-eji ogwe aka polypropylene emebere gburugburu ebe obibi. Dị ka mgbanwe bụ atụmatụ PP plastic, ị ga-ahụ na ọ dị ezigbo mma ịnọdụ ala.
Nwa oche, obere oche 1618-ụmụaka #
Ọgbara ọhụrụ a na-agbakwunye ebe obibi nwa gị.Ergonomic oche nwere usoro gbagọrọ agbagọ maka ezigbo nkasi obi oche a bụ nke ihe eji eme polypropylene nke gburugburu ebe obibi na ụkwụ nke ejiri osisi siri ike mee dị ka mgbanwe bụ atụmatụ nke PP plastic, ị ga-ahụ na ọ dị ezigbo mma ịnọdụ ala.
Isiokwu na-eri nri T-55 #
Tebụl iri nri a bụ ihe ndị na-achịkọta ihe nwere ọtụtụ ojiji na gburugburu ebe dị iche iche, ma n'ụlọ ma ọ bụ n'ọfịs, ọbụlagodi. Ọ na-enye ọtụtụ nke ebe maka kọfị na tii oge, n'ehihie ọgụgụ, na-arụ ọrụ, na-egosipụta ọkacha mmasị gị ite osisi na osisi, na mwube gị ime akara.
temper iko n'elu ọkụ nkume elu marble dini ...
Okpokoro marble kwekọrọ na obere ezinụlọ n'ihi na ha nwere ike iguzogide iwu dị irè, ọ naghị adị mfe ikpo unyi ma enweghị mmiri nwere ike imebi tebụl dị ka osisi. Okpokoro okpokoro a na-eri ice dị mfe site na kristal nke nkume na na usoro, a na-ehicha tebụl ahụ ma jiri ya kpuchie ọrụ mgbochi mmetọ, hichaa ngwa ngwa karịa mgbe ọ bụla. Tebụl mara mma bụ tebụl ejiri ọtụtụ ọrụ rụọ, nke nwere ike ịbụ tebụl, tebụl tii ma ọ bụ tebụl, iji weta ihe ...
Isiokwu na-eri nri T-15
Okpokoro iri nri dị n'elu nke emere maka obere ezinụlọ ga-enye ụlọ gị ụdị ejiji. Naanị nke a mere ka tebụl iri nri nwere ike ijide mmadụ anọ n'ihi obere akụkụ ya mana nke ahụ bụ ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche na ezigbo anya. Okpokoro okpokoro na-eme ka ndị mmadụ bịarukwuo nso ka ị ghara ịhapụ ohere iji soro ezinụlọ na ndị enyi nọrọ oge kachasị mma. Mere na inogide MDF na gafere metal ụkwụ na mpe mpe akwa n'okpuru onye ọ bụla iji chebe gị n'ala si ọkọ, you may be gett ...
Tebụl iri nri T-15L
T-15L: mechie n'ọnụ nchekwa nchedo, MDF inogide desktọọpụ ihe onwunwe, mara imewe.
Plastic oche 1666-ụmụaka #
Imewe bụ Mkpụrụ Obi maka oche Plastic. A na-eme oche ahụ nke ihe eji eme polypropylene na gburugburu ebe obibi mbụ, enwere ike kpuchie ụkwụ ụkwụ ma ọ bụ bufee osisi. Oche a na-ejikarị ime ụlọ eme ihe, nwekwara ike ịbụ ihe eji eme ihe n'èzí-ihe UV na mkpuchi uzuzu n'èzí. Dị ka mgbanwe bụ atụmatụ PP plastic, ị ga-ahụ na ọ dị ezigbo mma ịnọdụ ala.
Plastic oche - F803 #
Oche dị mma na ntọala siri ike na-eme ka oche oche a bụrụ ihe mara mma na ụlọ iri nri, ime ụlọ, ma ọ bụ kichin. Okpukpo a na-agbanyeghị aka na-enye nkwado dị ukwuu site na shei miri emi na ogwe aka dị elu. Kwụ na-agbatị na-etolite ntọala sara mbara, na-eme ka nkwụsi ike oche ahụ dị mma ma na -emepụta ọdịdị ziri ezi, na-atụ egwu.
Plastic oche-BV #
Banyere oche a plastik, usoro KD niile bụ ntụpọ ọkụ, obere ngwugwu nke kwesịrị maka ịntanetị. A na-eme oche ahụ nke ihe eji eme polypropylene niile nwere ezigbo gburugburu ebe obibi, yana nke mbụ ya, nke mara mma, nke na-enweghị ike ịga na nhọrọ ndị na-adịghị ahụ anya maka ntụaka gị.
Plastic Ogwe oche- 1780 #
Imewe bụ Mkpụrụ Obi maka oche Plastic. A na-eme oche oche mmanya nke ihe eji eme polypropylene zuru oke gburugburu ebe obibi. Nhọrọ dị oke mma maka nhọrọ gị. Nke a mmanya oche bụ ejikari ime ụlọ-eji, nwekwara ike ịbụ n'èzí-ojiji. Dị ka mgbanwe bụ atụmatụ PP plastic, ị ga-ahụ na ọ dị ezigbo mma ịnọdụ ala.
Plastic oche 1681 #
Imewe bụ Mkpụrụ Obi maka oche Plastic. Nye oche oge a na nnọkọ oriri na ọ orụ orụ ma ọ bụ ihe omume na-enweghị isi na oche ndị a. Ezigbo maka iri nri n'ime ụlọ ma ọ bụ n'ilo mpụga, oche ndị a na-adị mfe nchịkọta maka nchekwa na njem ngwa ngwa. A na-eme oche ahụ nke ihe eji eme polypropylene na gburugburu ebe obibi mbụ, enwere ike kpuchie ụkwụ ụkwụ ma ọ bụ bufee osisi. Nhọrọ dị oke mma maka nhọrọ gị. Oche a na - ejikarị ime ụlọ eme ihe, nwekwara ike ịbụ ihe eji eme ihe n'èzí na ihe unti-UV na mkpuchi uzuzu n'èzí ...
Forman bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke na-elekwasị anya na atụmatụ mbụ. Na-atụ aro sofa a nke ọma, ọ dị mma ịnọdụ ala ma ọ bụ ihi ụra n'elu ọdụm dị nro. Ejikọtara ya na kwushin na plastic plastic, ọ jupụtara na ụdị ejiji ma sie ike iji kwado ma ọ dịkarịa ala ibu 150kgs. Nwere ike tinye ya n'ime ụlọ gị iji kporie ndụ gị dị ebube! ọ bụla na agba dị, na-eche gị ase!
Plastic na-eri nri oche Shelly #
Imewe bụ Mkpụrụ Obi maka oche Plastic. Dị ka mgbanwe bụ akụkụ nke rọba plastic, ị ga-ahụ na ọ dị ezigbo mma ịnọdụ ala. Ọ bụ oche egwuregwu na-atọ ọchị na nke oge a nke na-eto ma ime ụlọ na ime ụlọ. Ejiri ụdị obere ihe na - enweghị isi na - agwakọta, na - agwakọta ihe ndị dị mkpa nke imepụta ọgbara ọhụrụ yana oche sara mbara ma na - atụgharị uche maka ọnọdụ kachasị mma. bụ n'ụzọ zuru ezu stackable, na-abịa n'ụzọ zuru ezu gbakọtara, na ekike na-abụghị m ...
N'ogbe Multi-ohere nnweta plastic chai ...
Anyị nwere ahụmahụ emeputa. Wining ọtụtụ nke dị oké mkpa asambodo nke ya ahịa maka Factory Kpọmkwem enye China Side oche Mode ...
Restaurantslọ oriri na ọverụ Denụ Denver nwere ihe okike na di ...
Otu ụlọ ọrụ a ma ama na-emepụta ngwá ụlọ si China
Iji achara bụ ezigbo ụzọ iji chọọ ụlọ gị mma
Taa, e nwere ọtụtụ ụzọ iji chọọ ụlọ mma na arịa mara mma maka ịme ihe pụrụ iche. Ma ị na-ahọrọ Asia ma ọ bụ Western ihe ndozi, i nwere ike ịbụ inter ...
ỌZ FREE KWES FREER FREE N'FREELỌ 0086-18630605237
Adreesị Obodo Shengfang, Bazhou City, Province Hebei, China